Semalt विशेषज्ञ रूपरेखा सामग्री मार्केटिंग गल्तीहरू तपाईंले त्याग्नु पर्छ
सामग्री मार्केटिंग डिजिटल अभियान रणनीतिको महत्वपूर्ण पक्ष हो किनभने यसले ग्राहक ट्राफिकलाई बढाउँदछ। उच्च ग्राहक ट्राफिकले कम्पनीलाई ग्राहक आधार र बिक्री राजस्व बढाउने लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्षम गर्दछ। यद्यपि खोज ईन्जिन अप्टिमाइजेसन (एसईओ) पेशेवरहरूले सामग्री मार्केटिंग प्रक्रियामा केहि गल्ती गर्दछन्।
Semalt डिजिटल सेवाहरु का ग्राहक सफलता प्रबन्धक लीसा मिशेल, आफ्नो अनुभव साझा र 11 सामग्री मार्केटिंग गल्ती समझा ।
१. पर्याप्त कार्य, तर अप्रभावी मास्टर प्लान
एक सफल सामग्री मार्केटिंग दृष्टिकोणका दुई प्रमुख कारकहरू छन्। यी प्रभावी रणनीति र रणनीतिक कार्यान्वयन हुन्। प्रभावकारी रणनीति भनेको मास्टर प्लान जुन डिजिटल अभियानका लक्ष्यहरू देखाउँदछ। रणनीतिक कार्यान्वयनले लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न आवश्यक कार्य समावेश गर्दछ। एसईओ विशेषज्ञले उचित रणनीति बिना मार्केटिंग लक्ष्यहरूको कार्यान्वयनमा संलग्न भएमा लगानी फिर्ता (आरओआई) कम हुनेछ।
२ सामग्री ब्लग पोष्ट जस्तै हो
डिजिटल मार्केटिंग प्रक्रियामा सामग्री महत्त्वपूर्ण छ। अनलाइन सामग्रीले भिडियोहरू, GIFs, वेबिनारहरू, पोडकास्टहरू, मेम्स, र सोशल मिडिया पोष्टहरू समावेश गर्दछ। एसईओ विशेषज्ञ ब्लग पोष्ट को परे विचार गर्नु पर्छ र ग्राहकहरु लाई अपील गर्ने सामग्री को विकास गर्नु पर्छ।
Hypot. काल्पनिक क्रेता व्यक्तित्वमा भर पर्दै
डिजिटल मार्केटिंग विज्ञहरू प्रायः इच्छित ग्राहकको आधारभूत प्रोफाइल जानकारीमा भर पर्दछन्। उदाहरण को लागी, बैंकिंग उद्योग मा सबै भन्दा मध्यम स्तर प्रबन्धकहरु 30० बर्ष देखि .० वर्ष बीचको पुरुषहरु हुन्। यो प्रभावी एसईओ रणनीति को विकास को रूप मा इच्छित ग्राहकहरु द्वारा अनुभवी प्रेरणा, अवसर, प्राथमिकता, र चुनौतीहरु बुझ्न को लागी महत्वपूर्ण छ। इच्छित बजारको बारेमा आलोचनात्मक जानकारी ग्राहक सर्वेक्षण र वेब अन्तर्वार्ता प्रयोग गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ।
The. श्रोताको न्यूनतम समझ
२०१ 2015 मा आईबीएम द्वारा गरिएको अनुसन्धानले पत्ता लगायो कि% 63% ग्राहकहरु लाई लाग्छ कि उनीहरुका मनपर्ने ब्राण्डले बुझ्दैनन्। एसईओ विशेषज्ञहरु को लक्षित ग्राहकहरु को आवश्यकताहरु र प्राथमिकताहरु विश्लेषण गर्नु पर्छ, र एक प्रभावी डिजिटल सामग्री को विकास गर्नु पर्छ जसले आवश्यकताहरुलाई सम्बोधन गर्दछ।
Content. सामग्री प्रकाशन डिजिटल मार्केटिंग बराबर
धेरै मार्केटिंग विज्ञहरू सामग्री अनलाइन प्रकाशित गरेपछि आराम गर्छन्। एक प्रभावी अनलाइन अभियान मात्र उच्च-गुणवत्ता सामग्री प्रकाशित गर्नु भन्दा बढी हो। यसले विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्महरू मार्फत सामग्रीको उचित वितरण समावेश गर्दछ; उदाहरण को लागी, ईमेल, यूट्यूब, ब्लग, र सोशल मीडिया।
SEO. एसईओमा पूर्ण भरोसा गर्दै
हालको प्रतिस्पर्धी व्यापार वातावरणमा, एसईओ रणनीति अन्य डिजिटल मार्केटिंग दृष्टिकोणको साथ प्रयोग गर्नुपर्दछ। SEO प्रक्रिया खोज इञ्जिनमा स्तर निर्धारण महत्वपूर्ण छ। जे होस्, मार्केटिंग सामग्रीको अपील नवीनता र रचनात्मकता मार्फत सुधार गर्न सकिन्छ। उदाहरण को लागी, मार्केटिंग विज्ञहरु मार्केट उत्पादनहरु को लागी हास्यास्पद GIF को उपयोग गर्न सक्दछन्।
Low. कम गुणस्तरको सामग्री
धेरै मार्केटरहरूले प्रभावकारी सामग्री उत्पादन गर्न पर्याप्त प्रयास र स्रोतहरू प्रयोग गर्दैनन्। यो मूल्यवान सामग्री विकास गर्न महत्त्वपूर्ण छ जुन ग्राहकहरूको आवश्यकता र रुचिलाई अपील गर्दछ।
Immediate. तुरुन्त परिणामको आशा
डिजिटल मार्केटिंग प्रक्रियालाई धैर्यता चाहिन्छ। यो किनभने ROI धेरै महिना वा अनलाइन अभियान को वर्ष पछि अनुभव गर्न सकिन्छ।
Many। धेरै रणनीतिहरु प्रयास गर्दै
अनलाइन मार्केटरहरू सबै इन्टरनेट अवसरहरूमा एक महत्वपूर्ण उपस्थिति पाउन प्रयास गर्दछन्। यद्यपि सबै अनलाइन प्लेटफर्महरूमा उच्च गुणवत्ताको सामग्री पुर्‍याउन सम्भव छैन। एसईओ विशेषज्ञ मार्केटिंग उद्देश्य को लागी केहि अनलाइन अवसरहरु मा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्छ; उदाहरण को लागी, यूट्यूब, ट्विटर, र ब्लगहरु।
व्यापार कार्यकारीहरूले मार्केटि team टोलीमा बिक्री सुधार गर्न दबाब दिन यो सामान्य हो। सामग्री मार्केटिंगमा, बिक्री धेरै स्पष्ट हुनुहुन्न। ग्राहकहरु लाई अपील गर्न को लागी प्रयास गर्नु पर्छ, उत्पाद वा सेवा किन्न को लागी उनीहरुलाई जबरजस्ती गर्नुहुन्न।
११. उत्तम अभ्यासहरूको पूर्ण पालन
जे होस् उत्तम अभ्यासबाट जानकारी महत्वपूर्ण छ, अनलाइन मार्केटरहरूले यसलाई अन्धाधुन्ध पछ्याउनु हुँदैन। यो किनभने केहि रणनीतिहरू जुन एक व्यवसायको लागि प्रभावकारी हुन्छ अर्को व्यवसायको लागि उपयुक्त नहुन सक्छ। डिजिटल टोलीले लक्षित ग्राहकहरूको आवश्यकता र अपेक्षाहरू पूरा गर्ने अद्वितीय र प्रतिस्पर्धी सामग्री विकास गर्न प्रयास गर्नुपर्दछ।